Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Hawaii Heerka Halista COVID-19 Heerka Sare ilaa Dhexdhexaad
Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Jabinta Hawaii • HITA • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Kamaainas • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Heerka COVID Hawaii wuu soo hagaagayaa
The Aloha Gobolka Hawaii wuxuu ka guuray Halista Sare oo wuxuu u gudbay Halista Dhexdhexaad maanta liiska Xeerka Covid Hadda.
Kiisaska COVID-19 ee Hawaii, isbitaal dhigista, iyo dhimashada ayaa hoos u dhacayey bishii la soo dhaafay.
Dawladdu waxay gaadhay xasaanada lo'da ee tallaalada marka loo eego tirada dadka la siiyay ugu yaraan hal mar dhawrkii maalmood ee la soo dhaafay.
Badhasaabka Hawaii David Ige ayaa weli ku talinaya in safarku ku koobnaado socdaalka loo arko in loo baahan yahay.
Xeerka Covid Hadda wuxuu siinayaa dhibco halis 5-midab ah gobollada iyo gobollada dalka oo dhan si muwaadiniinta iyo saraakiisha dowladda ay si fiican u fahmaan xaaladda COVID ee aaggooda. Isbahaysiga Sharciga Hadda waa 501 (c) (3) oo aan macaash doon ahayn oo ay aasaaseen mutadawiciin bishii Maarj 2020. Xeerka Covid Hadda waa hindise diiradda saaraya COVID si looga caawiyo dadka inay gaaraan go'aanno xog-ogaal ah iyagoo siinaya xog waqti iyo sax ah oo ku saabsan COVID gudaha Mareykanka
30-dii maalmood ee lasoo dhaafay, Tirada kiisaska Hawaii, isbitaal dhigidda, iyo dhimashadu way yaraadeen. Degmada Honolulu, Hawaii, ayaa soo warisay inay leedahay 156 sariiro ICU oo qaangaar ah. 86 waxaa buuxiyay bukaan aan COVID ahayn iyo 33 waxaa buuxiyay bukaannada COVID. Guud ahaan, 119 ka mid ah 156 (76%) ayaa la buuxiyay. Tani waxay soo jeedineysaa xoogaa karti ah oo lagu nuugo kororka kiisaska COVID.
Dawladdu waxay gaadhay xasaanadda lo'da labadii maalmood ee la soo dhaafay iyada oo heerka tallaalka ee 73.9% dadka la siiyay ugu yaraan hal qiyaas. Degmada Honolulu, Hawaii, 720,162 qof (73.9%) ayaa la siiyay ugu yaraan hal qiyaas oo 647,576 (66.4%) ayaa si buuxda loo tallaalay. Qof kasta oo ugu yaraan jira 12 sano wuxuu xaq u leeyahay in la tallaalo. In ka yar 0.001% dadka qaatey qiyaas ayaa la kulmay falcelin xun.
Celcelis ahaan, heerka caabuqa ee jasiiraduhu waa 69% iyadoo heerka tijaabada togan uu yahay 3%. Hadda waxaa jira 7.3 xaaladood oo cusub oo la soo sheego 100,000kiiba.
Degmada Honolulu, Hawaii, waxay leedahay nuglaansho hoose marka loo eego inta badan gobollada Mareykanka. Bulshooyinka leh nuglaanta sare waxay leeyihiin duruufo dhaqaale, bulsheed, iyo jireed oo hore u jiray kuwaas oo adkayn kara in laga jawaabo oo laga bogsado faafitaanka COVID.
Socdaalka weli waa in laga fogaadaa haddii aysan daruuri ahayn, ama socotada si buuxda ayaa loo tallaaley.
Maaskaro ayaa lagula talinayaa shakhsiyaadka lagu tallaalo meelaha bannaan ee gudaha dadweynaha si loo yareeyo faafitaanka kala duwanaanshaha Delta. Dadka aan la tallaalin waa inay sii wadaan waji -xidhka dhammaan goobaha dadweynaha.
Kulammada gudaha waa in laga fogaadaa dadka ka baxsan qoyska dhow, haddii aan si buuxda loo tallaalin.
Dugsiyadu waxay si badbaado leh u bixin karaan waxbarasho qof ahaan marka tallaabooyinkan xakamaynta caabuqa la hayo.